किन खाने खाली पेटमा लसुन ? - Aamsanchar
किन खाने खाली पेटमा लसुन ?
१। पेट सफा गर्छः
२। नसालाई झन्झन् हुनबाट रोक्छः
३। उच्च रक्तचापको समस्यामा राहतः
४। कोलेस्ट्रोलका लागिः
५। रोग प्रतिरोधी क्षमताका लागिः
लसुनको सेवनले रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढ्ने गर्छ । यसले हाम्रो शरीर निकै राम्रो तरिकाले रोगको सामना गर्नसक्छ ।